Kuthetha ukuthini iDamagnetic in Chemistry?
I-Glossary Glossary Inkcazo ye-Diamagnetic
Inkcazo yeDinemagnetic (Diamagnetism)
Kwi-chemistry kunye ne-physics, ukuba i-diamagnetic ibonisa ukuba i-substance iqukethe i- electron engapheliyo kwaye, ke, ayikhangeli kwintsimi yamandla. I-Diamagnetism yempembelelo yemilinganiselo efunyenwe kuzo zonke izinto, kodwa ukuba into ebizwa ngokuba yi "diamagnetic" ifuna ukuba yodwa inxaxheba kwimpembelelo yombane. Izinto eziphathekayo ezinomdaka ezinomdaka zinezinto ezinobungakanani obungaphantsi kweso sithuba.
Ukuba le nkunkuma ifakwe kwintsimi yamagnetic, isiqalo salo sondlo siza kuhambelana naso sensimbi (izinto eziphathekayo), ukuvelisa amandla aqhekezayo. Ngokwahlukileyo, izinto ezihamba nge-ferromagnetic kunye ne-paramagnetic zithandwa kumasimandla .
USebald Justinus Brugmans waqala ukubona i-diamagnetism ngo-1778, ekuboneni i-antimony kunye ne-bismuth yaxhaswa ngamagetsi. UMichael Faraday waqulunqa amagama kunye ne-diagnetism ngokucacileyo ukuba uchaze ipropati yokutshatyalaliswa kwintsimi yamagnetic.
I-NH 3 idayine ngoba yonke i-electron e-NH 3 idibene.
Ngokuqhelekileyo i-diamagnetism ibuthathaka kakhulu inokufunyanwa kuphela kwiimpahla ezikhethekileyo. Nangona kunjalo, i-diamagnetism inamandla ngokwaneleyo kwi-superconductors ukuba ibonakale ngokucacileyo. Isiphumo sisetyenziselwa ukwenza izixhobo zibonakala zikhuphe.
Olunye umboniso u-diamagnetism ungabonwa usebenzisa amanzi kunye ne-supermagnet (njengomlingo womhlaba ongaqhelekanga).
Ukuba umbane onamandla ugqitywe ngobuncwane bamanzi obuncinci ngaphezu kobuninzi bombane, insimu yamagnetic igxotha amanzi. Umdaka omncinci owenziwe emanzini ungabonwa ngokubonakalisa emanzini.
Inmosphere Inkcazo (iNzululwazi)
I-Electron Domains kunye ne-VSEPR Theory
I-WWF PPV Iziphumo ze-2000
Iilwimi zesiTaliyane: iTrovarsi
Ukuphononongwa kweWest Wight Potter 19
Iingcebiso zeZiko ezi-6 zootitshala
Ezidlulileyo zeePhepha zokuSebenza
Ukulungiselela iMviwo yomlomo
Ukubonisa ukuVala okanye ukuSondela
Imbali emfutshane yeTampon
Izixhobo eziPhambili zeSicwangciso seSifundo esibhaliweyo kakuhle
20 Abantu abaye bahlaziya ngokugqithiseleyo iifoto zabo zobuntwana
Izibingelelo zaseJapan ngeziganeko ezizodwa